Kana kuenzanisa private ndege chata kutiza Vs. Kirasi yokutanga vezvokutengeserana yendege Nhunzi funga chimedu pfungwa, zvakavanzika, inokosha zvinhu uye mukana wokushandiswa kufamba. Nepo kirasi yokutanga aikwana pamusoro yezvokutengeserana vendege inopa makumi inokosha zvinhu zvakadai panokwanisika zvigaro vane mamwe legroom, yakakura workspace, pakutanga chebhodhingi / exiting ropafadzo, uyewo kwokurumbidza zvokudya uye zvokunwa mune zvimwe zviitiko, izvi zvinhu kungasava zvakakwana vamwe mhepo vafambi, kunyanya avo kutsvaka mukana wokushandiswa mukuru uye customized mabasa. For fliers vakadaro, private ndege bumbiro Flights yaizova nani chingaitwa zvinotevera nezvikonzero:
Kubvuma sanduko uye Rugare Mind
Pasinei kubhururuka kirasi yokutanga pamusoro dzokutengesa vendege, ungada kuva panhandare yendege imwe nhamba maawa pamberi kutiza kwenyu. Nemamwe mashoko, iwe kungava beholden kune purogiramu yendege. Uyezve, kana pasina rokutengesa vendege inobhururuka zvakananga yako kwavaiendeswa, munofanira kutora unobva kutiza, chinogona kuva dzichikunetsa uye anowedzera ngozi yokurasikirwa mikwende yako. sezvinei, ane private ndege chata ndege, mungadai musina kuti kunetseka nematambudziko aya. zvakananga, kukwanisa kuchinja kwako purogiramu kufamba sezvo zvamunoda, achibhururuka zvakananga nokwawaienda chokupedzisira uye dzenyu mukwende vaizova vakachengeteka.
Mukuru Comfort uye Service
Ichokwadi, Kirasi yokutanga vezvokutengeserana yendege zvigaro inopa zvimwe zvikuru zvinhu, kusanganisira hombe yakanaka chair, soro-nokukurumidza Internet kuwana uye zvakasiyana-siyana nevaraidzo nzira. zvisinei, izvi zvinhu zviri nani pasina ndege chata ndege. Semuyenzaniso, ari kugara nzvimbo pamusoro private ndege kazhinji chakafanana mukuru-mugumo yokutandarira. Chii chimwe, pamusoro private ndege, mungadai rusununguko kushandura yenyu zvigaro nharaunda Sezvamunoda. Zvokudya uye zvinwiwa vaibayira private ndege bumbiro Flights vari uyewo wakakwirira yepamusoro uye kupa mukuru siyana.
Kana kuenzanisa private ndege chata kutiza Vs. Kirasi yokutanga vezvokutengeserana yendege Nhunzi, unofanira kufunga zvinhu zvakafanana chidimbu kwako pfungwa, zvakavanzika, inokosha zvinhu uye mukana wokushandiswa. Contact isu nhasi kuti bhuku private ndege chata ndege.